တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ရွှေမြန်မာတွေအတွက် ငွေရေးကြေးပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက် MmAccount v.1.1 APK (LATEST version)
ရွှေမြန်မာတွေအတွက် ငွေရေးကြေးပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက် MmAccount v.1.1 APK (LATEST version)
တကယ်ချမ်းသာလိုသူများအတွက် ငွေရေးကြေးတွက်ရများသူများအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ apk လေးပါ။ ကိုယ့်ဘက်က (သို့မဟုတ်) အခြားသူဘက်က အကြွေးရှိ/မရှိစစ်လို့ရတယ်။ မှတ်လို့ရတယ်။ နာမည်ကော ၊ ငွေ amount ပါဗျာ။ နောက်ပြီး မရှင်းရသေးရင် ရှုံ့မဲ့နေတဲ့ပုံပြပါတယ်။ မြန်မာနံပါတ်နဲ့ အတွက်အချက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ တွက်ရလည်းလွယ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုမှတ်လို့ရပါတယ်။ ဧပြီလ ၇ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ထွက်ပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/YJfll မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
MmAccount isavery simple crediting/debiting app for personal cash management. It'll assist you to note down the records of all your debtors and creditors. Managing your own money well is important for your financial well-beings, isn't it?MmAccount သည် အလွန် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကြည့်ရှူ့လွယ်သော အကြွေးစာရင်းကို မှတ်သားပေးသည့် app ဖြစ်ပါသည်။ ပေးရန်နှင့် ရရန် ရှိသော အကြွေးများကို အလွယ်ပင် ဖုန်းထဲတွင် မှတ်စုသဖွယ် မှတ်သား အသုံးပြုနိုင်သည်။ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝချင်သူ တစ်ယောက်အတွက် မိမိ၏ ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွယ်တတ်ရန် အရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလော။
Instructions / အသုံးပြုပုံ
Please visit to our facebook page for details (အသေးစိတ်ကို ဒီ link တွင် လာကြည့်နိုင်ပါသည်။)
Posted by အောင်မျိုး at 3:31 AM